Mauricio Pochettino oo fariin hanjabaad ah u diray kooxda Barcelona – Gool FM
Mauricio Pochettino oo fariin hanjabaad ah u diray kooxda Barcelona
Dajiye November 29, 2018
(Champ’ League) 29 Nof 2018. Macalinka reer Argantina iyo kooxda Tottenham Hotspur ee Mauricio Pochettino ayaa iska diiday inuu is dhiibo kahor kulanka ay Spurs-ka kula ciyaari doonto Barcelona wareega ugu dambeeya kulamada heerka group-yada ee tartanka Champions League.
Tottenham Hotspur ayaa u baahan inay garaacdo kooxda Barcelona kulankeeda ugu dambeeya group-ka B ee tartanka Champions League si ay ugu gudubto wareega xiga ee 16-ka, kadib markii ay xalay guul kaga gaareen Inter 1-0, maadaama sidoo kale la filayo in Inter Milan ay guul ka gaari karto PSV Eindhoven.
Hadaba Mauricio Pochettino ayaa warysi uu bixiyay kadib guushii ay ka gaareen kooxda Inter wuxuu saxaafada la wadaagay in ay si adag ugu dagaalami doonaan kulanka adag ay la qaadan doonaan kooxda Barcelona.
“Howlgalkena kulanka kooxda Barcelona, ma noqneyso waxaan macquul ahayn, sababtoo ah kubada cagta wax walba way dhici karaan”.
“Ugu horeyn waa inaan wajahnaa kooxda Arsenal, sababtoo ah waa kulan kaloo aad u adag, kadib waa inaan si adag ugu diyaar garoowno kulanka Barcelona”.
Ugu dambeyn Mauricio Pochettino ayaa wuxuu si weyn u amaanay qaab ciyaareedka ciyaartoyda ku sugan kooxda Barcelona, xili sidoo kale uu aaminsan yahay inay ka guuleysan karaan kulanka soo aadan.
Hadaba kooxaha qeybta ka ah Group B ee tartanka Champions League ayaa u kala sareeya sida tan:
– Barcelona = 13 dhibcood.
– Tottenham Hotspur = 7 dhibcood.
– Inter Milan oo leh = 7 dhibcood.
– Eindhoven = 1 dhibic oo kaliya.
Maurizio Sarri oo la walwalsan sababa la xiriira Eden Hazard
Thomas Tuchel oo sheegay sirta ka dambeysa guushii ay xalay ka gaareen kooxda Liverpool